MIZZ မဂ္ဂဇင်းကကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ဆယ်ကျော်ဘဝတွေအကြောင်းသင်ပေးသည် - သတင်း
အသက် (၁၃) နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ် ဦး အနေဖြင့်ဘဝသည်ခက်ခဲလွန်းလှသည်။ စဉ်းစားရန်နှင့်စိတ်ပူစရာများစွာရှိခဲ့သည်၊ ပါဝင်သည်သာမကကန့်သတ်ချက်များလည်းမရှိ။ ဘယ်အချိန်မှာငါ boobs များရလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောယောက်ျားလေးများကိုဘာကြောင့်မကြိုက်သနည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ MySpace ထိပ်ဆုံး ၁၆ နေရာတွင်ထည့်ထားသင့်သည်၊ ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကျောင်းဝတ်စုံမှာ Hit Me One More Time ရှိ Britney နဲ့မတူတာလဲ။ ငါပုံမှန်လား ငါစိတ်ပူသောအရာများသည်ကျွန်ုပ်၏မိခင်အားမမေးမြန်းနိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။ ငါသည်ငါ၏အညီအမျှ clueless အိမ်ထောင်ဖက်ကိုမေးမြန်းဖို့လည်းရှက်ခဲ့ကြလိမ့်မည်, ငါမှဖွင့်ဖို့မဆိုအေးမြအစ်မတွေရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကံကောင်းတာကငါမဇ္ဈိမမဂ္ဂဇင်းများကိုစုဆောင်းထားတယ်၊ အဲဒါကငါလိုအပ်သမျှပဲ။
အေးဆေးနေချင်ပေမယ့်သကြား၊ Mizz၊ Teen Vogue (သို့) J17 ကိုခွင့်မပြုခဲ့တဲ့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက် Mizz သည် (သူတို့ကအရမ်း sexy ဟုထင်သောအမေ) သည်အခြေခံအားဖြင့်သမ္မာကျမ်းစာဖြစ်သည်။ စိမ်းလန်းစိုပြေသောသူငယ်များ၊ တွန့်ဆုတ်ခြင်း၊ ဒါဟာဖြစ်စေသူတို့အားအဆင်မပြေဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဤကျောထောက်နောက်ခံဆိုင်ရာကိစ္စများတွင်လေးနက်သောဉာဏ်ပညာပုလဲအချို့ကျန်ရှိနေသေးပြီး၎င်းတို့သည်သင့်အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင်တတ်နိုင်သလောက်အသက် ၂၂ ခုအဖြစ်သင်ခန်းစာများစွာပေးနိုင်သည်။ တကယ်တကယ် သင်သည်သင်၏ကာလတယ်သောအရေးကြီးပါသည်။ ကြောင်းဖြစ်စေ, ဒါမှမဟုတ်ငါမဆိုအေးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပြီးခဲ့သည့် 10 နှစ်အတွင်းအတူတကွထားကြပြီမဟုတ်။
သင်၏အရှက်ကွဲမှုကိုဝေမျှနိုင်သောဤအဖြစ်မှန်ကိုနားထောင်ပါ။ ၂၀၀၉ ခန့်က Mizz မဂ္ဂဇင်း၏အပိုင်း -
တစ်နေ့ကျတော့ငါကျောင်းနောက်ကျတာနဲ့အမျှအမေကကျွန်တော့်ကိုဓာတ်လှေကားပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ ငါကားထဲကထွက်ဖို့အလျင်အမြန်ပြေးနေစဉ်, ဘယ်သူလမ်းလျှောက်သင့်တယ်ဒါပေမယ့်ငါ့အရူးအမူး။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသည့်အလွန့်ကိုရှက်စရာမဟုတ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်၏ဖိနပ်သည်အလျင်အမြန်ကျဆင်းသွားပြီးသူမကငါ့ကိုပြန်ထားရန်ကြိုးစားနေသည့်အရူးမိန်းကလေးတစ် ဦး ကဲ့သို့လှည့်ပတ်နေသည်ကိုသူမြင်ခဲ့သည်။ အော်ဟစ်! (Cleo, အီးမေးလ်ဖြင့်) ။
ဒါမှမဟုတ်ဒီတစ်ခု cringe ကနေ! ခင်ဗျားကဒါကို ၂၀၀၇ မှာပြန်မေးခဲ့တယ်
ငါကသော့ခတ်ရန်အများပြည်သူ loo bt 4got da တပ်ချ။ & wnt ။ အကြှနျုပျ၏ bro ရဲ့ m8 ငါ့ကိုနှစ်လယ်ပိုင်းတွင် Wee အတွက် wlked! အိုအရှက်ကွဲခြင်း၊ (txt အားဖြင့် Jayne) ။
ထိုအဖြစ်အပျက်များသည်မည်မျှအရှက်ရစေခဲ့သည်ကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သလော။ Cleo နှင့် Jayne သည်သူတို့၏ bro ၏အိမ်ထောင်ဖက်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်သူတို့၏အရူးအမူးဖြစ်ခြင်းတို့သည်ဖိနပ်ပေါ်တွင်တင်ရန်ရုန်းကန်နေရခြင်း၏fuckရာမ fucked ups များနှင့်ဆက်ဆံနေစဉ်? ဒါပေမယ့်သူတို့ကရွေ့သွားကြပြီ၊ သူတို့ကဖြစ်ပျက်မှုကိုလက်ခံပြီးပြီ။ အခုသူတို့ရယ်လိုက်ပြီ။ အဲဒါကိုဖတ်တဲ့အခါငါတို့ရှက်စရာရှက်စရာကောင်းတာတွေကိုပိုခံစားရတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူကမ္ဘာကြီးကိုမျှဝြေကဖို့သတ္တိရှိတာကိုကျေနပ်တယ်။ ခဏကြာပေမယ့်ကြိုးစားပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ရယ်မောနိုင်တယ်။ ဒါဟာရယ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပါ။ လူတွေကရယ်မောနိုင်ဖို့အတွက်မင်းကမင်းကိုမကြိုက်တဲ့မင်းရဲ့လတ်တလောစိမ်းလန်းစိုပြေသောကလေးငယ်ကိုအရှက်ရစေနိုင်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုအဖြစ်အပျက်ကိုအလှဆင်ရန်သင့်အားအားပေးသည်။
Joey Essex နှင့်စာရင်းတွင် Chris Brown ကိုမည်သည့်နေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်ကိုသင်စဉ်းစားပါက၎င်းသည် Mizz စာမျက်နှာများတွင်ရှိသည်
လူယဉ်ကျေးမှုနှင့် ၄ င်း၏အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ သို့သော် Mizz ကိုမည်သူမျှလက်ညှိုးထိုးမည်မဟုတ်ပါ။ ဘာကထူးဆန်းတာလဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကယောက်ျားလေးတွေရဲ့အယူအဆကိုနားလည်ဖို့ပထမဆုံးသင်သွားခဲ့တယ်။ သူတို့ကသော်လည်း, ပိုင့်သော့ခတ်သို့မဟုတ် shagging ကြသည်မဟုတ်, ထိုအချိန်ကသူတို့သည်သင်၏ကျောင်းဒစ္စကိုကနေရုံကောင်းသောကျောင်းကလမ်းပေါ်မှာသင်တို့ကိုနမ်းဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်သူကိုရှုပ်ထွေးသောလက်နှင့်အတူရုံကောင်းတဲ့လက်လှမ်းယောက်ျားလေးများဖြစ်ကြသည်။
Crush က the ည့်စားခန်းထဲမှာစားနေတုန်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများကသင့်ကို knickers များထဲတွင် sleepover = တွေ့ရခဲသည်။ ငွေကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေရင်မိဘတွေနဲ့ပြန်ဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏ ၀ တ်စုံချုပ်များသည်တောက်ပ။ ဒြပ်ဆွဲအားထားသင့်ပြီးဘေးတိုက်မြင်းခြံ၌သင်၏ဆံပင်ကိုအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်သင့်သည်
သငျသညျမပွုနိုငျအဘယ်အရာကိုမျှ, သင်အောင်နိုင်လို့ဘယ်နေရာမှာမဆို, သင်ခြေလျင်ဘောင်းဘီတိုနှင့်လူမှုရေးအခြေအနေသို့လမ်းလျှောက်လျှင်သင်၏တိုးတက်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်တဲ့စိမ်းလန်းစိုပြေလူကလေးနှင့်သင်၏ ဦး ခေါင်း၏ဘေးထွက်ချည်ထားသောတစ် ဦး scrunchie မရှိပါ။ ၎င်းသည်ပါဝါတစ်သင်းလုံးကကစားသမားဖြစ်သည် (ဆိုလိုသည်မှာ၊ အကယ်စင်စစ်သင်သည်ယခုအနည်းငယ် Update လုပ်သင့်သည်) ။
သူကကစားသမားလား အထီးကျန်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသောမိန်းကလေး Mizz ၏ပြofနာစာမျက်နှာ၏ Boy Stresses အပိုင်းကိုမေးသည်။ ငါတကယ်ကျောင်းမှာလူကလေးနဲ့တူပေမယ့်သူကတစ်နှစ်တာ9၌တည်ရှိ၏ - ငါတစ်နှစ်တာ7မှာပဲ - သူသည်ငါ့နှမရဲ့အဆွေခင်ပွန်းပါပဲ။ ကျနော်တို့စကားမပြောတတ်ပေမယ့်သူကတစ်ခါတစ်ရံမှငါ့ကိုငါ့အားနှင့်မျက်တောင်ခတ်ပြောပါတယ်။ ငါသူ့ကိုစိတ်ကူးယဉ်ပေမယ့်သူကကစားသမားတစ် ဦး နဲ့တူပုံရသည်။ ငါသူ့ကိုမေ့လျော့သင့်သလော မေတ္တာ၌မှသည်, Brighton
ငါ 'Love in Brighton' တွင်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အကြိမ်များစွာဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါသည်လည်းငါ smug ဝဒေနာပြင်းထန်သောဝေဒနာသည် ဦး လေးကနေပြtoနာကိုအဖြေ၏ကြေမွနုတ်ထွက်နုတ်ထွက်ဟုတ်တယ်, သူဖြစ်ကောင်းကစားသမားဖြစ်, ကထားခဲ့ပါ။ သင် Year7မှထွက်ခွာသော်လည်း fuckboy များကိုမူမထားခဲ့ပါ သင့်အားချောင်းဆိုးခြင်းကဲ့သို့သောအချိန်တိုင်းသင့်ကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောကြောက်မက်ဖွယ်ရာကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ရပ်များကိုမချန်မထားပါ။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်တွင်အဆုတ်ကင်ဆာနှင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကတိသစ္စာပြုခြင်းသို့မဟုတ် WebMD မှအရွယ်ရောက်ပြီးသောဝက်ခြံကိုရုတ်တရက်ရနိုင်ခြင်းရှိမရှိရှာဖွေရန်ကြိုးစားသော်လည်းဂူဂဲလ်မှလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်ဗာတာမှ Yasmina ဖြစ်လိမ့်မည် တကယ်တော့လည်ချောင်းနာနေတယ်။ ငါဆက်ပြောနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါ ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာရေးခဲ့တဲ့ Spotty, Devon, ဘာဖြစ်လို့ငါမသိဘူးအသားအရေအရမ်းဆိုးနေတယ်၊ ​​ငါဘယ်လိုပျောက်အောင်ငါလုပ်သလဲ။
သူတို့ဟာဓာတ်ပုံတွေမှာမကောင်းဘူး၊ ကျောင်းမှာအကြိုက်ဆုံးဘာသာရပ်တွေရတယ်၊ ပြီးတော့စနေ၊ တနင်္ဂနွေကနေ Frankie ဟာဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုမှာစင်မြင့်ပေါ်ကျသွားတယ်။ ဤအရာတို့ကိုသတိရပြီးနောက်တစ်ခါ Kim Kardashian ၏ Instagram ဓာတ်ပုံများကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်ပျက်ကွက်ပါကနှစ်သိမ့်မှုအတွက်သုံးပါ။
ဆေးလိပ်သောက်တာထက်စာရင် Mizz ကပိုဆိုးတယ်။ သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်၏ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်း၊ ကျောင်းမှထွက်ခြင်း၊ သင်၏လက်များဖြင့်လူကိုသတ်ခြင်းနှင့်သင်၏ကြမ်းပြင်အောက်ရှိကိုယ်ခန္ဓာကိုပုန်းအောင်းခြင်းဖြင့်ရယူခြင်း - ဤအရာများသည်သင်ဆေးလိပ်သောက်သည့်အခါသင်၏ခန်ဓာအားမည်သို့ပြုသည်ကဲ့သို့မကောင်းပါ။ သင်ဤအကြံဥာဏ်ကိုလိုက်နာပါကသင်ကိုယ်တိုင်ငွေအမြောက်အများစုဆောင်းလိမ့်မည်။